म:म कत्तिको खानुहुन्छ ? धेरै खानुहुन्छ भने सतर्क रहनुहोस हुन सक्छ यस्तो…. - ramechhapkhabar.com – ramechhapkhabar.com
म:म कत्तिको खानुहुन्छ ? धेरै खानुहुन्छ भने सतर्क रहनुहोस हुन सक्छ यस्तो….
रक्तचापको परीक्षण १२०/ ८० एमएमएचजीका आधारमा गरिन्छ । यहाँ १२० अंक सिस्टोलिक रक्तचाप हो र यसलाई सामान्य भाषामा हाई प्रेसर भनिन्छ । अनि तलको रक्तचापलाई डाइस्टोलिक भनिन्छ अर्थात् लो प्रेसर । वृद्ध व्यक्तिहरूमा सिस्टोलिक रक्तचाप विशेषगरी बढ्छ र लगभग १६०/८० हुन सक्छ । युवामा १४० सिस्टोलिकभन्दा माथिको रक्तचाप र वृद्धहरूमा १५० भन्दा बढी रक्तचाप भएमा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
रक्तचाप सन्तुलनमा राख्नका लागि मम लगायतका खानेकुरा कहिलेकाहीँ मात्र खाने गर्नुपर्छ । नियमित रूपमा रक्तचापको परीक्षण गर्नुपर्छ । स्वास्थ्यस्थितिमा परिवर्तन आउनेबित्तिकै चिकित्सकको परामर्श लिइहाल्नुपर्छ । नोट: माथिका सल्लाह सुझाब समान्य ज्ञान स्वरुप बताइएको हो । यदि कुनै प्रकारको स्वस्थ्य समस्या देखिएमा चिकित्सकको परामर्श लिनु पर्दछ । सोही अनुसार गर्नुपर्दछ ।